VaTsvangirai Vosimbisa Kuti Sarudzo Dzichaitwa Gore Rinouya
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vanoti sarudzo dzemunyika dzinogona kuitwa mukati memwedzi mipfumbamwe negumi nemiviri zvichitevera kupedza kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika.
Vachitaura vari mu New Zealand murwendo rwavo rwekupedzisira kunyika nhatu dzavashanyira mwedzi uno, VaTsvangirai vati Zimbabwe inofanirwa kuronga sarudzo dzakachena dzinoitwa pachitevedzwa zvose zvinodiwa kuitira kuti sarudzo idzi dziitwe nenzira kwayo.
VaTsvangirai, avo vapeta rwendo rwavo mushure mekushanyira Japan, Australia ne New Zealand, vatiwo vanotarisira kuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vakagadzirira kusiya masimba vakakundwa sarudzo.
Mutungamiri wehurumende atiwo VaMugabe munhu ave kuda kuchengetedza chimiro chake nenhoroondo yake nekudaro vakagadzirira kusiya chigaro murunyararo.
VaTsvangirai vatiwo kunyange hazvo vamwe vatungamiri vemauto vari kuti havasi kuzobvuma kuti VaTsvangirai vatungamire nyika vakakunda sarudzo, VaTsvangirai mbune vanoti vanhu ava vashoma zvikuru nekuti ruzhinji rwemauto nemapurisa vanovatsigira.
VaTsvangirai vatiwo zvirango zvose zvakatemerwa VaMugabe nevamwe vavo muhurumende zvinofanirwa kubviswa zvose. VaTsvangirai vataura mashoko aya vari kuNew Zealand mushure mekutaura nemutungamiri wenyika iyi, VaJohn Key muWellington neChitatu.
VaKey vati VaTsvangirai vataura zvavagutsa zvekuti vachataura negurukota ravo rezvekudyidzana nedzimwe nyika kuti vaone kuti voita sei nenyaya iyi. VaTsvangirai vari kutarisirwa munyika neChina.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira, Muzvare Gladys Hlatswayo vanoti vashamisika nemashoko aVaTsvangirai ekuti VaMugabe vachatambira zvinenge zvabuda musarudzo.